Amma, LibreOffice iin Hindii, AfaanThai, Ibraayisxii, fi Arabiffa afaanota CTL deeggara.
Yoo yaa'insa barruu mirga irraa gara bitaatti filatte, barruun idaatii lixaa ammayyuu bita irraa gara mirgaatti fiiga. Qareechi furtuulee xiyyaatti deebiisa, akkaataa kanaan Xiyyi Mirgaa "gara dhuma barruuchaatti" fi Xiyyi Bitaa " gara jalqaba barruchaatti" socho'u.
Furtuulee armaan gadii keessaa tokko dhiibuun sududaan kallatii barreessuu barruu jijjiiruu ni dandeessa:
AjajaCtrl+Shift+D yookiin AjajaCtrl+Mirga Furtuu Shift - galfata barruu mirgaa gara bitaatti jijjiira.
AjajaCtrl+Shift+A yookiin AjajaCtrl+Bita Furtuu Shift - galfata barruu bitaa gara mirgaatti jijjiira.
Idaatiiwwan furtuu fooyyessitoota-qofaan yommuu gargaarsi CTL dandeessifamu qofa hojjetu.
Fuulota sarjaa hedduu keessatti, kutaaleen yookiin goodayyootni kanneen barruutiin dhangeessamani mirgarraa gara bitaatti yaa'u, sarjichi jalqabaa sarjaa mirgaa fi sarjichi dhumaa sarjaa bitaati.
Barreessaa LibreOffice keessatti barruun Afaan Thai keessatti dhangeessame amaloota armaan gadii qaba:
Keewwatoota hiriirfama qixxeessi keessatti, sararoota mudaanota biraa walqixxeessuuf arfiiwwan ni diriirfamu. Afaan biroo keessatti iddoowwan jechoota gidduu ni diriirfamu.
Arfii guutuu hundaa haquuf furtuu Haqxuu fayyadami. Kuticha dhumaa arfiicha hundaa kan darbe haquuf furtuu Duubxoola fayyadami.
Arfiicha guutuu hundaa itti aanutti yookiin kan darbetti utaaluuf furtuu Xiyyaa Mirgaa yookiin Bitaa fayyadami. Qaree garakeessa Arfii hundaa qubachiisuuf, DirqalaAlt+furtuu Xiyyaa fayyadami.
Title is: Afaanota Teessuma Barruu Xaxamoo Fayyadaman